Gaar kala duwan Self Dheelitirka Gaadhi curyaanku - Jomo Technology Co., Ltd
Mannequin waxay leeyihiin in la go'aamiyo sida tayada motor ah. Haa, waxa ay aad u qiimaha badan oo ah lacag, si kastaba ha ahaatee qaadashada eegno dhismaha, iyo tayada sheer ee dhismaha this wiil halis ah, aad la yaaban yihiin in ama aan waa transformer ah ee ku dhuunto. Si fudud loo dabayn karo, fudud si loo xakameeyo xataa Waayo, kuwaas oo naga mid ah oo aan safar samayn skeidgareeyo ama Electric longboard, Badbaadiyo lacag caddaan ah shidaalka, iyadoo la isticmaalayo remotes fudud, waxa si aan jeclahay oo ku saabsan alaabtii this? Waxay keeni doonaa wheel si xor ah ayna miiqdaan iyo waxay keeni kartaa in dhibaato in aad is ama dhaawac arrimaha aad ku wareegsanaa. Labada giraangiraha waxay leeyihiin jirka ah waara u dhaxeeya halkaas oo mid ka mid ah ka heli kartaa meesha taagan. Adag doonaa ayay u badan tahay in la dulmarka kuuskuus in wadada. Waxay leeyihiin design beerfale in la oggalaado qolka jilibka ka badan iyo maamulka shukaanta, si dhaqso ah ku soo biiraan pack batari, height kursiga laysku hagaajin karo iyo dillacinin-caddayn Taayirada. Ilaah mahaddiise, cabsi aan in shirkadaha weyn ku tiirsan tahay wax soo saarka mass arki lahaa waxa laga yaabaa in aan arkay iyo burburin u teknoolajiyada u kacaya ayaa xaqiijiyay sabab. Waana imtixaanaynaa up on dhan oo ka mid ah khaladaad marxalad hore oo soo arag in xitaa waa la qiimeeyaa waqti our in ay baaritaan dheeraad ah.
Fikradaha Our ku tilmaami waayo-aragnimada dhabta ah nolosha on looxyada dhabta ah - Koowheel Smart Balance Wheel K8 yihiin aad u faa'iido badan oo macquul ah maxaa yeelay, iyagu aad u yar yihiin iyo waxa loogu talagalay in Milan, waxa ay asal ahaan suuqa EU kartoo. Dhinaca mid, design xamili Qarsoon, si fudud u qaadeen; Dhinaca kale, off design wheel wadada, si fudud u qabsadaan indhaha ka mid ah model celceliska. Waxaa intaa dheer, waa miisaanka caato ah iyo Nuur.
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah noocyada ilaaliyaal xawaare, iyadoo awoodooda si weyn u kala duwan. The Fariin iyo dardargelinta sidoo kale waxay noqon kartaa wax yar daalid, nasiib daro ku joogaana ma kala jejebiyey dedejiyo halka jeestay in koorsada kale oo wheel iyo motor badiyay jar xaddidaysa awood aad si aad u yarayso hoos iyo kor u xawaare kartaan ama. Laakiin Koowheel K8 hoverboard korontada waa gaar ah, maxaa yeelay, xawaaraha max waa 10km / h, markii xawaaraha baabuurta ee gaadho goob xawaaraha digniin ah 10km / h, digniinta qaylo alaarmiga; marka hoos xadka xawaaraha (qiimaha dhigay: 10km / h), qaylo digniinta kama alarm. Sidaas darteed waa ammaanka aad loo barbar dhigo mootooyinka kale ee caadiga ah. Ma aha in aad walwalo si deg deg ah in ay codkeeda ku habboon.
Run ahaantii hal qaab oo dhan ah iyo si kastaba ha ahaatee fuula, wax fiican! Si aad bilaawdo safarka oo dhan waxaa waajib ah in la sameeyo waa talaabo ku leh hal lug oo rajeyneynaa in nuurka hoggaamiyey ra'iisul of mishiinka u iftiimiyo. Sababtan awgeed shirkadaha kala duwan ee suuqa ayaa ka go'an in ay dhisaan mooto is miisaamid . Ka hor inta aadan Oga sida lagu skeidgareeyo korontadashuqullada, waxaad yeelan doontaa inay haleelaan waxa aad isticmaali inay ka sameeyaan. Wajiga waxaa ka mid ah, in aan muhiimad noqon doonaa qaabka la baaxad weyn isticmaalka hoygoodu of 3-D casriga ah. Warbaahinta Print dib loo isticmaali doonaa, hubaal habboon gudaha guriga iyo sidoo kale degaanka. The dhakhso u kacdo, ka wanaagsan in xasiloonida, ka gaabinaya, inaannu tagno, waxaa soo baxday galay wax badan ka adag si ay u sii dheelitirka. Si kastaba ha ahaatee, sare danab aad u ordaan, tegis ah u heli doonaan. Taasi micnaheedu waa in sheyga ayaa via imtixaanka ammaanka dowladda-nidaamiyo, qiimeynta barnaamijyada xeedho korontada iyo batari, ayaa xaqiijiyey in ay noqon ammaan ah.